Mayelana NATHI - JJD MachINERY CO., LTD.
Njengomuntu osezingeni eliphakeme oyisisekelo se-aluminium casting and reputations eyakhiwe eChina, sisebenzela amakhasimende ethu emhlabeni wonke. Ukusebenza ngabakhiqizi abaphezulu abaphezulu nabakhiqizi be-OEM yokusabalalisa okuluhlaza noma okwenziwe ngomshini, imikhiqizo yethu isetshenziselwa ukukhanyisa, imishini yezokwelapha, izinto zokuhamba, ukukhiqiza i-3C, izesekeli, izesekeli zikagesi, izingxenye zemishini.
I-JJD igxile kumakhasimende futhi inikezela umkhiqizo osezingeni eliphakeme ngentengo yokuncintisana. Silithokozela ithuba lokusebenzisana nekhasimende lethu. Sihlala sikhona ukubhekana nezinkinga zakho futhi siphendule ngezidingo zakho. Baningi abahlinzeki, kepha siyaqiniseka ukuthi iJJD izoba yisinqumo sakho esihle kunazo zonke. Kusukela ekuqaleni, impendulo enembile nokusekelwa okusebenzayo kuzohlinzekwa, kufaka phakathi ukubonisana okuphezulu kanye nokwazi indlela yokwenziwa kokwenza izinto. Sivulekile futhi sithembekile kumakhasimende ethu, sinamathela emugqeni wethu wesikhathi futhi sihambisa umkhiqizo ngekhwalithi ye-premium.
I-JJD ngeke iyehlise amakhasimende.
Isigaba Sokucwaninga Nentuthuko i-JJD sesungule iphrojekthi yokuthuthukisa isikhunta kanye nenqubo yokuphonsa i-aluminium alloy casting, futhi nange-Pressurization ye-inert-gas, ukuze ixazululwe ngokuphelele ...